tikapurfm टीकापुरमा ७ दिने उद्घोषण तथा भाषण कला सम्बन्धि तालिमको समापन
महिला पुनस्थापना तथा तालिम केन्द्रको आयोजनामा भएको एक हप्ते उद्घोषण तथा भाषण कला सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ । टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को आर्थिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गंगाराम आचार्यले तालिममा सिकेका कुरा व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष कमला केसीले समाजमा हुने गरेको हिंसाहरु न्युनिकरण गर्नका लागि महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाले महिलाहरु परनिर्भर भएको कारण आफुमाथि भएको हिंसा बाहिर उजागर गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वडा नं. १ का वडा सचिव पुष्कर थापा, सामाजसेवी सुर्यचन्द्र भटटराई, सहभागी विन्द्रा चौधरी, शुला खत्री, जाल्पा भट्टराई, पत्रकार गिता चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
तलिममा उद्घोषण गर्ने तरिका उद्घोषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, भाषण गर्ने, सिप लगायतको बारेमा छलफल गरिएको थयो । तालिममा नेपाल रेड्क्रस सोसाईटी टीकापुर उपशाखाका सभापति जगदिश्वर पण्डितले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । तालिम टीकापुर नगरपालिका वडा नं १ को आर्थिक सहयोग र महिला पुनस्थापना तथा तालिम केन्द्रको आयोजनामा रु १ लाखको लागतमा भएको हो ।